को हुन काठमाडौ म’हानगरमा एमालेले उपमेयर उम्मे द्वार ब नाएको सुनिता डंगोल ? – Ap Nepal
को हुन काठमाडौ म’हानगरमा एमालेले उपमेयर उम्मे द्वार ब नाएको सुनिता डंगोल ?
April 28, 2022 496
काठमाडौं । देशको सर्वाधिक चासो रहेको संघीय राजधानी काठमाडौको मेयरमा सधैं चर्चामा रहेका केशव स्थापितलाई एमालेले उम्मेद्वार बनायो । यसमा अधिकांसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ । तर उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डंगोलको नाम कमैले मात्र सुनेका थिए । डंगोलको नाम उपमेयरमा आएपछि धेरैले को हुन् भनेर जिज्ञासा राखेका छन् । डंगोलको संक्षिप्त परिचय हामीले हामीले यसरी प्रष्तुत गरेका छौं ।
सुनिता को परिचय
सन् २०११ मा मिस नेवाको ताज पहिरिएकी डंगोल बहुमुखी प्रतिभा भएकी एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ । नेपाल र नेपाली संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने उद्देश्यले रञ्जना लिपीलाई विश्वभर फैलाउन भूमिका खेलिरहेकी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ । सुनिता लिपी क्वीनको उपनामले पनि चिनिनुहुन्छ । नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने उनी क्याली जात्रामार्फत विश्वभर भर्चुअल रुपमा लिपी सिकाउँदै त्यसको सम्वर्द्धन गर्दै आउनुभएको छ ।
जापान, कोरिया, जर्मनलगायत एक दर्जन बढी देशहरुको भ्रमण गरेकी उनले काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषण गरेकी थियो । केही समय अघि आफूसँग काठमाडौँ शहरको विकासको योजना रहेको भन्दै उनले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सामाजिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी सुनिताले नेपाली संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्जमा सम्वर्द्धन गर्दै आउनुभएको छ । डाइनामिक लिडरका रुपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मान्ने सुनिता अन्ततः एमालेबाट काठमाडौँको उपमेयरको उम्मेदवार बन्नुभयो ।
Prevजथाभावी लेखेको भन्दै दुबईको जेलमा परेका नेपाली पत्रकार पाण्डेलाई युएईका राजकुमारले दिए आम माफी …
Next२ महिनापछि सामाजिक सञ्जालमा समीक्षा अधिकारी, भन्छिन् “तिम्रा लागी सधैँ म हार्न सक्छु ” हेर्नुहोस् स्टाटस्
लोकप्रिय गायक पशुपती शर्मा र गायिका देवी घर्तीले ल्याए ‘खित्त खित्त हाँस्थे’-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नर्स करुणा दाहाल भन्नुहुन्छः “कन्याजाली (भ’र्जीनिटी) फाट्दैमा ब लात्कार गर्यो भन्ने हुँदैन्” ( भिडियो सहित )
बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरी: बोल्छि न् यती राम्रो नेपाली, भन्छिन्- ‘गो र्खाली हुँ’ (भिडियो सहित)